यस्ता थिए बाल्यकालका मेरा दिनहरु (पुस्तक अंश) « Dainiki
यस्ता थिए बाल्यकालका मेरा दिनहरु (पुस्तक अंश)
संवत् १९९० साल असोजमा मेरी पितामहीको अवसान भएको थियो भने संवत् १९९१ को असार महिनामा मेरी माताजीले जुम्ल्याहा छोरी जन्माउनुभएको थियो । त्यसैबेला पिताजीले आफ्नो सम्पूर्ण परिवारलाई मेरो मावली बनारसमा पु¥याइदिने निर्णय गर्नुभयो । त्यही निर्णयअनुसार हामी सबैको राहदानी पनि बन्यो । काठमाडौ“ उपत्यकाबाट बाहिरतिर जाने प्रत्येक नेपालीले चिसापानीगढीमा राहदानी देखाउनुपथ्र्यो । हाम्रो परिवारको राहदानी भान्दाइ जगन्नाथले बनाउन लगाएर ल्याइदिनुभएको थियो । त्यो राहदानी त्यही दिन मैले पनि पढेको थिए“ । राहदानीमा मेरो नाउ“ लेखेर अन्य विवरणपछि ‘वर्णः गहुँगोरो’ लेखेको देख्दा म अति खुसी भए“ । मलाई सबै जना कालो वर्णको केटो भन्ने गर्थे । राहदानीमा भने नेपालको सरकारले मलाई गहु“गोरो भनी लेखेको रहेछ । मलाई कालो भन्नेहरु सबै जना असत्य कुरा गर्दा रहेछन् भन्ने लाग्यो । तर त्यो दिन मैले राहदानीमा आफ्नो नाउ“ र रङ्गबारे मात्र पढेको रहेछु । त्यही राहदानीमा मभन्दा बढी श्याम वर्णकी मेरी माताजीलाई पनि गहु“गोरी लेखेको मैले पढिनछु ।
असारको अन्तिमतिर एक बिहान साढे चार बजे हामीले बनारस जान हाँडीगाउ“को घर छाड्यौ“ । त्यही साँझ डोले भरियासहित चित्लाङ पुगेर राति हामी बास बस्यौ“ । हाम्रो दोस्रो बास भीमफेदीमा भयो । त्यहा“ पुग्दा–नपुग्दै मेरी माताजीमा रक्तस्राव हुन थाल्यो । सुत्केरी भएको तीन सातापछि मात्र घरदेखि चित्लाङ र भीमफेदीसम्म आफूस“गै दुइटी बच्ची लिएर उलिनकाठमा यात्रा गर्नुपरेको हु“दा उहा“मा रक्तस्राव सुरm भएको रहेछ । तिनताक भीमफेदीमा कुनै अस्पताल वा डाक्टर थिएन । हामीले भीमफेदीमा पा“च दिनसम्म बास बस्नुप¥यो । भीमफेदीमा रहेका ‘भरिया नाइके’का अड्डावालाहरुलाई भनेर त्यहा“का धामीलाई बोलाइयो । तिनले मन्त्र पढ्दै माताजीलाई झारफुक गरिदिएपछि रक्तस्राव रोकिएको थियो ।
यस यात्राका क्रममा हामीसँगै जगन्नाथ भान्दाइ पनि जानुभएको थियो । भीमफेदीबाट यात्रु बस चढेर हामी अमलेखगन्ज पुग्यौ“ । यसपटकको यात्रामा हामीले अमलेखन्जदेखि रक्सौल हु“दै बनारससम्म टे«नमा पहिलो पटक चढ्न पाएका थियौँ । ट्रेनमा बस्नुभन्दा पहिले जगन्नाथ भान्दाइले मुद्रा सटही गरेर भारतीय मुद्रा एकन्नीहरु ल्याई “अब सबै मिलेर पहिले रेलको डिब्बामा एक एक आना चढाएर रेल्वेको दर्शन गरेर चढ्नुपर्छ” भनी सिकाउनुभएको म सम्झन्छु । हामीले त्यस्तै ग¥यौ“ र टे«नमा चढेर पहिले भारतको रक्सौलमा पुग्यौ“ ।
बनारसमा मेरो मावलीको घर निकै विशाल थियो । मेरा सात जना माइजूहरु रोजैजसो गङ्गास्नान गर्न जानुहुन्थ्यो । उहाँहरुको दिव्य सुन्दर रेशमी पोशाक र केश शृङ्गार मलाई साह्रै मन पथ्र्यो । स्वर्गका अप्सराजस्ता नारीहरुको त्यो समूह दुईवटा घोडाले तान्ने बग्गीमा बसेर घाटतिर जान्थ्यो । उहा“हरु बग्गीमा बस्दा बग्गीका झ्यालढोका जम्मै बन्द गरिन्थे । म बग्गीमाथि बस्थे“ । मलाई अचम्म लाग्थ्यो– बग्गीको झ्यालढोका बन्द गरेर बाहिर नदेखिने हो भने उहाँहरुको त्यति राम्रो पोसाक र शृङ्गारको अर्थ के ?
तिनताका भारतको बनारस इलाकामा महात्मा गान्धीले सुरू गरेको ‘विदेशी वस्तुको बहिष्कार’ आन्दोलन बलियो रुपमा चलिरहेको थियो । एक दिनको घटना हो– गङ्गास्नान गरेपछि काशी विश्वनाथको दर्शन गर्न गएका बेला बग्गीबाट ओर्लिंदै गर्दा मेरा माइजूहरुको जम्काभेट सत्याग्रहीहरुसँग भयो । शरीरमा बेलायती रेशमी दोपट्टाहरु देखेपछि सत्याग्रहीहरुले ती बेलायती वस्त्रहरु उहाँहरुका शरीरबाट उतारेर आगोमा हालिदिन आग्रह गरे । ती रेशमी दोपट्टाहरु मेरी माताजीले काठमाडौँबाट जाँदा माइतीमा कोसेली भनेर लागिदिनुभएको थियो । माइजूहरुले त्यसो गर्न इन्कार गरेपछि ती सत्याग्रहीहरुले उहाँहरुका शरीरबाट ती दोपट्टा खोस्दै आगोमा हाल्न थाले । म हेरिरहेको थिए“– दुई जना सत्याग्रहीले माइजूहरुले पहिरिएका बेलायती रेशमी साडी पनि खोस्न आ“टेका थिए । तर अन्य सत्याग्रहीहरुले “साडी बेलायती होस् अथवा भारतीय, त्यसमा नारीको प्रतिष्ठा रहन्छ । त्यसकारण साडी र ब्लाउज शरीरबाट नझिक” भनी रोकेका थिए ।
हामी बनारस पुगेको तेस्रो दिनको तर पहिलो घटना त्यो थियो । गङ्गास्नानबाट फर्किसकेपछि मैले मामाका छोराहरुसित प्रश्न गरे“, “त्यस्तो किन गरियो ? सत्याग्रह भनेको के हो ?” तिनीहरुले मेरो प्रश्नलाई आफ्ना मातापितासामु पु¥याए । मेरा जेठा मामा अम्बिकाप्रसाद उपाध्याय बिहारको राजधानी पटनाको उच्च न्यायालयमा प्रमुख अधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । उहाँले पछि मलाई बुझाइदिनुभयो– “भारतमा बेलायतको प्रभुत्व रहेको हुँदा महात्मा गान्धीले भारतबाट बेलायतलाई निस्केर जान भन्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् । त्यसैकारण बेलायती वस्तुको बहिष्कार गर्न खोजिएको हो ।”
उमेरको एघारौँ वर्षमा प्रवेश गर्न लागेको मैले मामाका ती कुरा कति नै बुझे“ हुँला र ! तर केही दिनपछिको घटनाबाट मैले ब्रिटिसविरोधी स्वतन्त्रता आन्दोलनको अर्थ अलिकति बुझे“ ।
मामाघरको तल्लो कोठामा मेरै उमेरका जस्ता छ जना केटाकेटीहरु ‘को मान्छे कतातिर’ भनी खेलिरहेका थिए । त्यहाँ म पनि पुगे“ । मसित त्यही प्रश्न गरियो, “मदन, तिमी कतापट्टि ? भाइसरायपट्टि कि भगत सिंहपट्टि ?” मलाई ती दुवै जनाबारे केही थाहा थिएन । कुनै जवाफ नदिई म आफ्नो ठाउँमा बस्न जाँदा द स्टेट्सम्यान नामक अङ्ग्रेजी भाषाको दैनिकी अखबार कुल्चिन पुगेछु । आफ्नो ठाउ“मा म बसेपछि र म चुप लागेको देखेर “मदन, अङ्ग्रेजपट्टि रहेछ; त्यसैकारण चुप लाग्यो” भनी मलाई निर्घातसित पिट्न दुई जना अघि सरे । तर ठूला मामाका प्रथम पुत्र, उमेरमा मभन्दा दस महिना जेठा राजेश्वरी उपाध्यायले ती दुवैलाई रोकेर भने, “मदनले भर्खर त्यो अखबारमा खुट्टाले टेकेको सबैले देखिहाल्यौँ । त्यो अखबार बेलायती हो; बेलायती वस्तुमाथि खुट्टा टेक्नेलाई बेलायतको समर्थक भन्नु हुँदैन ।” यसरी उहाँले मलाई पिटाइबाट जोगाउनुभयो ।
त्यो घटनाबारे मेरा मामा–माइजू र मेरा पिता–माता आदि सबैले थाहा पाउनुभयो र राजेश्वरी दाइको बहादुरीको ठूलो प्रशंसा गर्नुभयो ।
हामीलाई बनारस पु¥याएको पन्ध्र दिनपछि पिताजी आफ्नी आमाको बरखीका लागि १९९१ सालको फूलपातीको दिन काठमाडौँ पुग्छु भनेर हिँड्नुभयो । त्यस्तैमा मेरी ठूली दिदी देवकुसुमको पहिलो र एउटै छोरो निकै बिरामी भए । बनारसको उग्र गर्मीले उनको जीउभरि र हातखुट्टामा घाउका फोकाहरु निस्केका थिए । उपचारका अनेक प्रयत्न गर्दागर्दै पनि उनको मृत्यु भयो । माताजी र मामाहरुले यो घटनाबाट साह्रै दुःखी भएर पिताजीलाई टेलिग्रामद्वारा बनारस फिर्ता बोलाउनुभयो । वीरगन्जमा त्यो समाचार सुनेपछि पिताजी भोलिपल्टै बनारस फर्किनुभयो । उहाँ मेरो मामाघर आइपुग्नुहुँदा एक जना पण्डित बाजेले मृत बालकलाई दुई हातले बोकेर गङ्गाजीमा दाहसंस्कार गर्न लैजान लागेका थिए । मेरी ठूली दिदी र माताजीको अवस्था बेहाल थियो । मृत बालकलाई गङ्गाजीमा सेलाउन लग्दा म र पिताजी तथा मेरा दुई जना मामा पनि सँगै गयौँ ।
माताजीको पीडा र आँसु पुछ्न पिताजी सात दिनसम्म बनारसमै बस्नुभयो । त्यसपछि उहाँ फेरि काठमाडौँ फर्किनुभयो । त्यस्तैमा दुई महिनाकी मेरी कान्छी बहिनी गिरिजा गर्मीले गर्दा सिकिस्त बिरामी भई । पिताजीलाई फेरि टेलिग्राम दिइयो । त्यस बेला उहाँ भीमफेदीमा पुगेर ‘क्वारेनटाइन’ अन्तर्गत बस्नुभएको तीन दिन भएको रहेछ । छोरीबारे खबर पाएपछि उहाँ फेरि बनारस फर्किनुभयो । पिताजी फर्किसक्दा गिरिजाको मृत्यु भइसकेको थियो ।
यी सबै घटनाबारे उहाँले काठमाडौँमा आफ्ना पितालाई पत्र लेखेर जानकारी दिनुभयो । आफूले बनारसमै बसेर माताको वार्षिक श्राद्ध गर्ने निर्णय गरेको पनि उहाँले लेख्नुभएको थियो । मेरा पितामह काशीनाथ आचार्य दीक्षित आफ्नो परिवारभित्र समेत अत्यन्त अहङ्कारी हुनुहुन्थ्यो । आमाको श्राद्धमा छोरो नआएकोबारे उहा“को चित्त बुझेनछ । मेरा पिताजीलाई जवाफी पत्रमा उहाँले लेख्नुभयो, ‘आमाको वार्षिक श्राद्धमा गर्नुपर्ने ठूलो श®यादानमा आफूले पनि अंशभाग अनुसार सहभागी हुनुपर्छ भन्ने बुझेर तँ काठमाडौँ आइनस् भन्ने बुझिएको छ ।’ त्यो पत्र मैले पनि पढेको थिएँ । त्यस्तो पत्र पढेपछि पिताजी झन् बढी क्रुद्ध हुनुभयो र आफ्ना पितालाई उहाँले तीन पङ्क्तिको पत्र लेख्दै भविष्यमा आफू कहिले पनि काठमाडौँ नआउने, नफर्किने कुरा बताउनुभयो ।
म सम्झिन्छु– त्यो वर्षको फूलपातीको दिन मेरा पिताले बनारसमा बसेर आमाको वार्षिक श्राद्ध गर्नुभयो । त्यसमा पुरोहित हुनुहुन्थ्यो– बनारसका चार जना विशिष्ट नेपाली पण्डितहरु बटुकप्रसाद भट्टराई, नारायणप्रसाद भट्टराई, गोपालप्रसाद भट्टराई र कृष्णप्रसाद भट्टराई । त्यो श्राद्धको अग्निचर्यामा कृष्णप्रसादजीले मन्त्र पढ्दै र स्वाहा–स्वाहा भन्दै चरूहोम गर्नुभएको थियो, जो पछि नेपालको प्रधानमन्त्री हुनुभयो ।
बनारसमा केही महिना बस्दाबस्दै त्यो सहरमा ‘बेरी–बेरी’ को रोग महामारीजस्तो भएर फैलिन थाल्यो । त्यस बेला त्यस रोगको औषधिबारे डाक्टरहरुमा पनि जानकारी थिएन । मानिसको गर्धनदेखि तल पैतालासम्म शरीर सुन्निएर दुई खुट्टा हात्तीका पाइलाजस्ता हुने गर्थे । केहीको भनाइअनुसार तोरीको तेलमा त्यो रोगको कीटाणु मिसिएर हात्तीपाइले रोग सुरू भएको थियो । माताजी र ठूली दिदीमा त्यो रोग देखा परेको थियो । साता दिनदेखि दुवै जनाको शरीर घनघोर रुपमा फुलेको थियो र पिताजीले “अब जे भए पनि म आफ्नो गाउँ फर्किन्छु” भनी हामी सबैलाई लिएर बनारस छाड्नुभयो । एक रात नौ बजेको टे«नमा हामी सबै जना बस्यौ“ । गाजीपुर रेलवे स्टेसनमा पुग्नुभन्दा पहिले दुवै जनामा ‘बेरी–बेरी’ रोग घटेजस्तो अनुभव भयो । छपरा पुग्दासम्म दुवै जनालाई शरीरबाट बिदा माग्यो । आश्चर्य के भयो भने बनारसमा राति नौ बजे टे«न चढेका थियौ“ हामी, मुजफ्फरपुर पुग्दासम्म माताजी र दिदी दुवै जनाको शरीरबाट बेरी–बेरी रोग अन्त्य भयो । मुजफ्फपुर स्टेसनबाट हामी रक्सौल आइपुग्दा माताजी र दिदीमा पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भइसकेको थियो । जे होस्, रक्सौल स्टेसन उत्रिँदा माताजी र ठूली दिदीले चाहि“ पूर्ण स्वास्थ्यलाभ गरिसक्नुभएको थियो ।
रक्सौलबाट हामीलाई त्यस बेलाको हाम्रो मौजा बहुअरी पु¥याउन पटवारी रामनारायण कण्ठ गोरूगाडा लिएर स्टेसन आएका थिए । बहुअरीमा माताजी र मेरो जीवनको नयाँ अध्याय सुरू भयो । नेपालको तराई क्षेत्रसित तथा त्यहाँका धनी वा गरिब किसानहरुसित, तिनको संस्कृति तथा जीवन व्यवहारसित माताजी र मेरो परिचय रोजिन्दा बढ्दै गयो ।
त्यो समयको सुरूमा पिताजीको परिचय वीरगन्जमा रहेका पशुपति घोष र तिनका वृद्ध स्वजन (हामी उहाँलाई दाह्री बाबु भन्ने गथ्र्यौं) सित परिचय भयो । पिताजीको आग्रहमा भारतको कलकत्ताको अमृतबजार पत्रिकाको वार्षिक ग्राहक बन्यौँ । त्यो अखबार आउन थालेपछि माताजीले मलाई अखबार पढेर त्यसमा रहेका मुख्यमुख्य समाचारहरुबारे बताउने गर्नुभयो । पछि त्यो काम मैले सुरू गरे“ । त्यसरी मेरो पत्रकारिता जीवनको प्रथम चरण त्यो पत्रिका पढेर माताजीलाई समाचार सुनाउनेबाट सुरm भएको थियो । त्यो समयमा युरोपमा इटालीको फासिस्ट सरकारको मुख्य अधिपति बेनिटो मुसोलिनीले भूमध्य सागरको दक्षिणतिर रहेको अफ्रिकाली देश एविसिनियामाथि आव्रmमणको तयारी गरिराखेको थियो ।
समाचार सुन्ने र बुझ्ने काममा बहुअरीका धनी किसान बैजनाथ अहिर तथा दशरथचन्द्र कुर्मीका साथै अरु दुई जना किसान पनि हामीछेउ आउने गर्थे । त्यो गाउ“को कच्ची छाप्रोको ओसारामा रहेको काठको ठूलो चौकीमा माताजी र म बस्ने गथ्र्यौं । अनि म समाचार बताउने गर्थें । ती किसानहरुलाई युरोपका देशहरुको भूगोलबारे सामान्य जानकारी हुने गथ्र्यो । माताजी भने मैले पनि नबुझेका समाचारहरु सुनेपछि हामी सबैलाई बुझाइदिने गर्नुहुन्थ्यो ।
(दीक्षितको हालै प्रकाशित संस्मरणत्मक कृति ‘मेरी माता’बाट ।)
प्रकाशित मिति : १९ माघ २०७५, शनिबार ०७:५०
आखिर बिष मात्र पोखिए अधरहरुबाट(गजल)
– घनश्याम मुडभरी (यात्री) बारम्बार लुटिएँ म तिम्रा शहरहरुबाट । बरु जोगिएको थिएँ सधैँ पत्थरहरुबाट
सरिता अर्यालको ‘मेरो अपहरण’ लोकार्पण
११ साउन, काठमाडाैँ । सरिता अर्यालको नियात्रा संग्रह ‘मेरो अपहरण’ शुक्रबार सार्वजनिक भएको छ ।
बचाउ सिमाना (कविता)
छन्द :- भुजङ्गप्रयात सुत्र :- iss iss iss iss डुबेको छ बारा अछामी छ भोको
दही चिउरासँगै गुञ्जिए ढकालका कविता
१६ असार, पाेखरा । साहित्यका माध्यमबाट शैक्षिक, सामाजिक, पर्यटकीयलगायतका क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने लक्ष्यका साथ पोखरेली